Taliyeyaasha ciidamada dhulka iyo Badda oo xilalkooda ku kala wareegay+Sawirro - Hargeele - Wararka Somali State
Taliyeyaasha ciidamada dhulka iyo Badda oo xilalkooda ku kala wareegay+Sawirro
Muqdisho.(SONNA):– Munaasabad kooban oo ay xilalka ku kala wareegayeen Taliyeyaasha ciidamada dhulka iyo Badda ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay Muqdisho.
Xafladda ayaa waxaa ka qeyb galay saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo marti sharaf kale.
Jeneraal Cabdixamiid Maxamed Daahir Taliyihii hore ee ciidanka dhulka, haatanna ah Taliyaha ciidanka badda oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay munaasabadda maanta, isagoo intaa ku daray in uu xoogga saari doono sidii uu u gudan lahaa waajibaadka ka saaran tayaynta ciidanka badda.
Taliyihii hore ee ciidanka badda, isla markaana ah Taliyaha ciidanka Dhulka Sareeyo Cabaas Aamiin Cali ayaa uga mahadceliyay taliyihii hore howsha uu qabtay, waxaana uu balan qaaday in uu dar dargelin doono howlaha horyaala.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage oo xafladda soo xiray ayaa Taliyayaasha ciidamada Dhulka iyo Badda kula dardaarmay inay si hufan u gutaan waajibaadka loo igmaday.
“Waxaan rajeynayaa mas’uuliyadda hortaala ee waqti badan aan ku soo bixinay, hadana aan waqti badan ku bixin doonaan in uu Alle u fududeyn doono, runtii waa mid la isugu duceeyo ee ma ahan mid la isugu hambalyeeyo, waa mas’uuliyad ay waajib muqadas nagu tahay in sida ay tahay aan uga soo baxno” ayuu yiri Taliyaha ciidanka xoogga dalka..
RASMI: Barcelona oo ku dhawaaqday inay la saxiixatay Miralem Pjanić
Boqolaal Qoys oo ay saameeyeen abaaraha Gedo oo ka ka faa’ideystay gar gaar Hay’adda Hormuud foundation gaarsiisay+sawirro
Dowladda Libya oo codsatay taageero iyo in maxkamad la soo taago General Haftar
Guddiga diyaarinta sharciga Doorashooyinka oo la kulmay Xildhibaannada iyo Odayaasha ka soo jeedo Gobolada Waqooyi ee dalka+Sawirro